Jamaahiirta Man United Oo Ku Jees Jeesay Antoine Griezmann Sabab La Xiriira David de Gea – Gool FM
(Manchester United ) 28 Abriil 2018 Weeraryahanka kooxda Atletico Madrid iyo xulka qaranka France Antoine Griezmann ayaa helay dhaleeceen iyo jees jees kadib markii uu saaxiibkiis Jan Oblak ku tilmaamay inuu yahay gool haayaha ugu fiican aduunka xiligan la joogo.
Jamaahiirta Manchester United ayaa si weyn kaga carooday hadalkan kasoo yeeray Antoine Griezmann, waxay durbaba bilaaween inay ku jees jeesaan xidiga reer France.
Goolhayaha Jan Oblak ayaa kulankiisii ugu bandhiga fiicnaa uu ku qaatay kooxda Atletico Madrid wuxuu kaga horyimid Arsenal wareega afar dhamaadka ee tartanka Europa League, isagoo dhinac kasta kulankan u bad baadiyay kooxdiisa.
Hada jamaahiirta kooxda Manchester United oo ka careesan hadalkan kasoo yeeray Antoine Griezmann ayaa waxay qaar kood ku weerareen baraha bulshada laacibka reer France waxaana hadaladii ay ku weerareen ka mid ahaa:
“Griezmann ma daawanin David de Gea sida ay ila tahay”.
“Qof walba oo aan sheegin in David de Gea uu yahay goolhayaha ugu fiican adduunka ama uu ka weyn yahay, ma uusan daawanin wax ciyaar ah ay ciyaartay Manchester United seddexdii sanno ee ugu danbeysay, wuxuu kulan kasta sameeyaa bad baadino fara badan”.